Over the past year andahalf, given the pandemic and the political situation, Studer Trust moved our cohorts to Alumni Online Courses to ensure attendees safety and access. With each course, the students and teachers have become increasingly comfortable engaging with the online format, albeit with ongoing connectivity issues. Such was the case for our fourth Alumni Online Course (AOC 4), which tookafocus on science.
The AOC4lasted four weeks beginning in July and was aimed at improving science lesson planning. The course topics included Lesson Planning, Investigating, Teaching Aids and Assessment Tools. Each participant was required to make one lesson plan for each, with weekly feedback sessions from both the trainers and other participants.
One thing we knew to plan for was internet connectivity issues due to unstable networks. To get around this issue, instructors called all teachers by phone that were not able to attend after each lesson. They also posted the contents of each session to the Facebook group to ensure that the information was there for all participants to review.
Overall, attendees found the AOC to be highly valuable and we heard feedback such as:
“The materials helped me to plan the lessons easily and effectively. I was able to polish my prior knowledge and learn new techniques which helped me improve so much.”
“I became able to make the lesson plans without difficulties. Although I was afraid of teaching Science before, I gained confidence to teach now. The course motivates me to learn more and more and makes me more confident through the materials.”
“The feedback helped me think of other points of view and exchange knowledge. It will help me make the best lesson plan so that my teaching in class will be successful.”
“The lessons are easy to follow and appropriate for the participants. So, I could finish the course without difficulty.”
“I will be able to teach by using better teaching techniques and making better lesson plans. I improved my communication skills through feedback sessions. I got knowledge and new techniques that I can share with my colleagues. So it is effective for my personal development and for my school.”
“I gained new techniques andalot of knowledge from the course. I also got new experiences. I am interested in participating in other courses held by TTC.”
The Studer Trust Teacher Training Center (ST-TTC) would like to express its appreciation to the participants for their active participation and enthusiastic learning. Because of them, the ST-TTC is able to deliver many courses, and continuously make lasting impact on the communities we serve. Most importantly, the TTC would also like to acknowledge and thank our donor, the Wai Yan Association. Without their support, these trainings and online courses would not be possible.
ပြီးခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခွဲအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကပ်ကာလနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများအရ Studer Trust အနေဖြင့် Alumni Online Courses အား လုံခြုံရေးနှင့် သင်ကြားနိုင်မှု အခြေအနေများကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါသည်။ သင်တန်းတစ်ခုချင်းစီတွင် ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများသည် အွန်လိုင်းမှ စာသင်ကြားမှုပုံစံနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရှိမှု သိသိသာသာတိုးတက်လာပြီး လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု ပြဿနာများကြောင့်သာ နှောင့်နှေးမှုအနည်းငယ်ရှိနေပါသည်။ ထို့အတူ သိပ္ပံသင်တန်းအတွက် (AOC 4) အာရုံစိုက်သင်ကြားနေသည့်ကာလအတွင်း ယင်းကဲ့သို့ ကိစ္စရပ်မျိုး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
AOC4အား ဇူလိုင်လမှ စတင် သင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီး လေးပတ်တာ ကြာမြင့်ခဲ့ကာ သိပ္ပံသင်ခန်းစာပြင်ဆင်မှုတိုးတက်လာရန် အာရုံစိုက်ကာ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ သင်ခန်းစာပြင်ဆင်မှု၊ စူးစမ်းရှာဖွေလေ့လာမှု၊ သင်ကြားမှု အကူအညီများနှင့်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ စသည်တို့ ပါဝင်သည့် သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်များအား ထည့်သွင်းပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းပေးသူနှင့် တက်ရောက်သူများထံမှ အပတ်စဉ် အကြံပြုချက်များပြောကြားသည့် သင်တန်းချိန် အပါအဝင် သင်တန်းတက်ရောက်သည့် ဆရာတစ်ဦးလျှင် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ရေးဆွဲရပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မတည်ငြိမ်သော ကွန်ယက်များကြောင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းပြဿနာအား နီးနီးစပ်စပ် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် သင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးသည့်အချိန်တိုင်းတွင် သင်တန်းမတက်ရောက်နိုင်သည့် ဆရာများအား နည်းပြဆရာမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူများမှ သင်ခန်းစာများအား ပြန်လည်ကြည့်ရှုသုံးသပ်နိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းချိန်တစ်ခုချင်းစီမှ သင်ခန်းစာများအား Facebook Group တွင် တင်ပေးခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ခြုံငုံပြောရလျှင် သင်တန်းတက်ရောက်သူ ဆရာများက AOC သင်တန်းအား အလွန် တန်ဖိုးထားကြပြီး အောက်ပါကဲ့သို့ အကြံပြုချက်များအား ပြန်လည်ကြားသိရပါသည်။
“သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများက သင်ခန်းစာ ပြင်ဆင်ရာမှာ လွယ်ကူစွာနှင့် ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် အကူအညီပေးခဲ့ပါသည်။ ရှိပြီးသား ဗဟုသုတအား ထပ်ဆင့်သိရှိခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ကျွန်မကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ကူညီပေးမည့် နည်းစနစ်များအား သင်ကြားနိုင်ခဲ့ပါသည်။”
“အခက်အခဲမရှိဘဲနှင့် သင်ခန်းစာများအား ရေးဆွဲနိုင်လာခဲ့ပါသည်။ ယခင်က သိပ္ပံဘာသာရပ်သင်ကြားရန် ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုရှိခဲ့သော်လည်း ယခုတွင်တော့ သင်ကြားရန် ယုံကြည်မှုရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤသင်တန်းက ကျွန်မအား ပို၍ ပို၍ သင်ယူလိုစိတ်ရှိလာစေရန် နှိုးဆော်ပေးခဲ့ပြီး သင်ကြားရေးပစ္စည်းများမှ တဆင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လာနိုင်စေပါသည်။”
“အကြံပြုချက်များသည် ကျွန်မအား ဗဟုသုတများဖလှယ်ခွင့်ရစေပြီး အခြားသော ရှုထောင့်များမှ တွေးမြင်လာတတ်စေပါသည်။ ထိုအရာသည် ကျွန်မအတွက် သင်ခန်းစာရေးဆွဲရာတွင် အကူအညီပြုတာကြောင့် စာသင်ခန်းအတွင်း စာသင်ကြားပို့ချရာတွင် ပိုမိုအောင်မြင်မှုရရှိစေလာမည်ဖြစ်သည်။
“သင်ခန်းစာများသည် လိုက်နာသင်ယူရန် လွယ်ကူပြီး သင်တန်းတက်ရောက်သူများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ ထို့အတွက် ကျွန်မအနေဖြင့် သင်တန်းအား အခက်အခဲမရှိ တက်ရောက်ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။”
“ပိုမိုကောင်းမွန်သော သင်ကြားရေး နည်းစနစ်များအား အသုံးပြု သင်ကြားပို့ချနိုင်လာမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ပိုကောင်းသော သင်ခန်းစာများအားရေးဆွဲလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြံပြုချက်ပြောကြားကြသည့် သင်တန်းချိန်မှ တစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်သည် စကားပြောဆိုမှုစွမ်းရည် တိုးတက်လာပါသည်။ သင်တန်းအတွင်း သင်ကြားလာခဲ့ရသည့် ဗဟုသုတများနှင့် နည်းစနစ်များအား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် မျှဝေနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် ကျွနိုပ်၏ စာသင်ကျောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်၏ တစ်ကိုယ်ရည် တိုးတက်မှုအတွက်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။”
“၎င်းသင်တန်းမှ နည်းစနစ်အသစ်များနှင့် ဗဟုသုတများစွာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ အတွေ့အကြုံသစ်များလည်းရရှိခဲ့ပါသည်။ TTC မှ ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်မည့် အခြားသော သင်တန်းများအားတက်ရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပါသည်။”
Studer Trust ၏ ဆရာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးစင်တာအနေဖြင့် သင်တန်းတွင်တက်ကြွစွာ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စိတ်အားထက်သန်စွာသင်ယူလေ့လာပေးခဲ့ကြသည့် တက်ရောက်သူများအား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။
ပါဝင်တက်ရောက်ပေးကြသူ များကြောင့်သာလျှင် Studer Trust ၏ TTC သည် သင်တန်းများစွာအား ပို့ချနိုင်ခဲ့ကာ ကျွန်ုပ်တို့ ပံပိုးနေသည့် ပြည်သူလူထုအတွက် ဆက်လက် အကျိုးပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအနေဖြင့် Wai Yan Association နှင့်တကွ အလှုရှင်များအား TTC အနေဖြင့် အထူးအသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်ရှိလိုပါသည်။ အလှုရှင်များ၏ပံ့ပိုးမှုမရှိပါက ဤကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများနှင့် အွန်လိုင်းသင်တန်းများရှိလာနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။